फ्रेशवर्क्स: एक सूटमा बहु रूपान्तरण दर अनुकूलन मोड्युलहरू Martech Zone
यस डिजिटल युगमा, मार्केटिंग स्पेसको लागि लडाई अनलाइन सरेको छ। अनलाईनमा धेरै मानिसहरूसँग, सदस्यताहरू र बिक्रीहरू तिनीहरूका परम्परागत स्थानबाट तिनीहरूको नयाँ, डिजिटलमा सारियो। वेबसाइटहरू आफ्नो उत्तम खेलमा हुनुपर्दछ र खाता साइट डिजाइनहरू र प्रयोगकर्ता अनुभव लिनुपर्दछ। नतिजाको रूपमा, वेबसाइटहरू कम्पनी राजस्वको लागि महत्वपूर्ण भएका छन्।
यस परिदृश्यलाई दिइएको छ, यो हेर्न सजिलो छ रूपान्तरण दर अनुकूलन, वा CRO को रूपमा यसलाई चिनिन्छ, कुनै पनि टेक-सेभी मार्केटर आर्सेनलको महत्वपूर्ण हतियार बनेको छ। सीआरओले कम्पनीको अनलाइन मार्केटिंग उपस्थिति र रणनीति बनाउन वा भ break्ग गर्न सक्दछ।
बहु सीआरओ उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध छन्। समस्या, तथापि, सीआरओ अझै पनि अक्षम छ। टेक्नोलोजीमा इभोलुसनलाई रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसन गर्ने तरीकाले मिरर गरिएको छैन।
रूपान्तरण दर अनुकूलन एक गाह्रो काम हो। यहाँ एक विशिष्ट परिदृश्य छ:
मार्केटरले पहिलो पृष्ठ उपकरणको साथ अपलोड गर्नु पर्छ। उहाँसँग कफि छ र पृष्ठहरू लोड भएको रूपमा आफ्ना मेलहरू जाँच गर्दछ। त्यसो भएपछि, पृष्ठमा परिवर्तनहरू सुरू गर्दछ। र त्यसपछि उसले आफ्नो टेक टीमको मद्दत लिनु पर्दछ आफ्नो वेबसाइटमा परिवर्तन गर्नका लागि। र त्यसपछि, उसले पृष्ठमा सबै तत्वहरू तिनीहरूको फाइदाको लागि राखिएको छ कि भनेर जाँच्न परीक्षणहरू गर्छ। यदि होईन भने, ऊ फेरि सुरू गर्दछ, पेज लोड गर्नबाट, र अर्को कफि छ। यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, उहाँ अझै पनि रुटिनसँग अड्किएको छ जुन वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको थालनी भएको थियो - र हामी सबै बाँकी छन्। त्यहाँ सीआरओ मा कुनै खास नवीनता छैन, विडंबना पर्याप्त छ।
यद्यपि, फ्रेशवर्कको उत्तर छ। Freshmarketer (पहिलेको Zarget) वर्ष २०१ any मा कुनै महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रगति देखेका छैनन् कि एक उद्योग मा नवीनता ल्याउन र पहिले अवस्थित थियो कि परीक्षण अनुकूलन गर्न र विकासकर्ताहरु मा बजार 'निर्भरता तोड्न को लागी स्थापना भएको थियो।
आफ्नो साइटको रूपान्तरण दर सुधार गर्न खोजिरहेका कम्पनीहरूले सधैं आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न मोड्युलहरूको अराजक एरेमा भर पर्नु पर्दछ, र एकल अभियानका लागि बहु सफ्टवेयर उत्पादनहरू किन्नु पर्छ - केहि फ्रेशमार्केटर एक एकल सफ्टवेयर उत्पादमा बहु अनुकूलन मोड्युलहरू प्रस्ताव गरेर सम्बोधन गर्न खोज्छ। , त्यहाँ प्रक्रिया समाप्त गर्न कुनै पनि थप हेर्नको लागि आवश्यकतालाई हटाउँदै।
अर्को शब्दहरुमा, अन्त बाट अन्त्यमा अनुकूलन अब सम्भव छ, केवल एउटा सफ्टवेयर उत्पादन प्रयोग गरेर - जसलाई भनिन्छ सीआरओ सुइट। फ्रेशमार्केटरको टोली लेखीयको सट्टा चक्रीय प्रक्रियाको रूपमा रूपान्तरणको बारे सोच्न मनपराउँदछ, जहाँ वेबसाइटहरूबाट डेटा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ, जुन तपाईंले अनुमानहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन तपाईं अनुकूलनको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन परिणामस्वरूप अधिक डाटा प्रदान गर्दछ - र त्यसपछिको चरणहरू चक्र अनुसरण गर्नुहोस्।
फ्रेशमार्केटरको अद्वितीय समाधान यसको क्रोम प्लगइनमा रहेको छ, र यसको सबै इन-वन रूपान्तरण सूटमा। यसको उद्योगको पहिलो क्रोम प्लगइनले चेकआउट पृष्ठहरू परीक्षण गर्न र अनुकूलन गर्न अत्यन्तै सजिलो बनाएको छ, जुन पहिले अफ-सीमाहरू थिए। परम्परागत अप्टिमाइजेसन उपकरणहरू सीमित थिए कि तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो पृष्ठहरू अर्को साइट मार्फत लोड गर्न आवश्यक पर्दछ। यसले सुरक्षा जोखिम उत्पन्न गर्‍यो र यसको मतलब यी उपकरणहरूले के गर्न सक्दछन् भन्नेमा प्रमुख सीमितताहरू थिए। यद्यपि फ्रेशमार्केटरको टोलीले यी सबै सीमितताहरूलाई बाइपास गरेको छ। यसको सबै-इन-रूपान्तरण सूटमा हीटम्याप्स, A / B परीक्षण, र फनेल विश्लेषण एकसाथ समावेश छ।
यहाँ केहि राम्रा चीजहरू छन् जुन तपाई फ्रेशमार्केटरसँग गर्न सक्नुहुन्छ:
पृष्ठहरू अप्टिमाइज गर्नुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस् सहि तपाईंको ब्राउजरबाट, सँग फ्रेशमार्केटरको क्रोम प्लगइन.
प्रत्यक्ष डाटा रिपोर्टहरू हेर्नुहोस् - अन्तर्दृष्टि रूपमा र जब अन्तरक्रिया हुन्छन्। कुनै अधिक स्न्यापशटहरू छैनन्।
बहु शक्तिशाली प्रयोग गर्नुहोस् सीआरओ मोड्युलहरू केवल एक उत्पादनको साथ।
क्लिक ट्र्याक गर्नुहोस् अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइट तत्वहरूमा।
URL अनुकूलित गर्नुहोस् सजिलोसँग, तपाईंको टेक टीमको न्यूनतम मद्दतको साथ।
प्राप्त एकीकृत समाधानहरू जब तपाईं व्यक्तिगत मोड्युलहरू चलाउनुहुन्छ। ए / बी सहित बिल्ट-इन हिटम्यापहरू सहित।
फ्रेशमार्केटरको सिफारिश अप्टिमाइजेसन चक्र प्रक्रिया फनेल विश्लेषणको साथ सुरू हुन्छ। फनेल विश्लेषण त्यो हो जहाँ पानाहरूका सेटहरू जुन रूपान्तरण मार्गको रूपमा काम गर्दछन् जाँच गरिन्छ जहाँ दृश्यहरू फनेलबाट झर्छन्। यसले तपाईंलाई जान्न मद्दत गर्दछ कसरी दर्शकहरूले रूपान्तरणको ठूलो प्रस in्गमा अन्तरक्रिया गर्दछन्।
अर्को, तपाईं हिटम्यापहरू प्रयोग गर्न अघि बढ्नुहुन्छ जुन फनेल विश्लेषणहरूसँग एकीकृत हुन्छ। हीटम्याप्स समग्र पृष्ठ क्लिक डाटाको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हुन्। तिनीहरूले तपाइँलाई वेबसाइट तत्वहरू देखाउँछन् जसले खराब प्रदर्शन गर्दछ, र तपाइँको साइटको कुन भागहरूलाई फिक्स गर्न आवश्यक छ। सिकिसकेपछि जहाँ तिनीहरूले छोडिन्छ, तपाईं सिक्न किन तिनीहरूले छोडिन्छन्।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो कमजोर तत्त्व र पृष्ठहरू पहिचान गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईं अन्तिम चरणमा जान सक्नुहुन्छ - A / B परीक्षण। जहाँसम्म, तपाई A / B परीक्षण सुरू गर्नु अघि, यो परीक्षणको लागि ठोस परिकल्पनाहरू गठन गर्न उत्तम हुन्छ। ए / बी परीक्षणहरूको लागि अनुमानहरू तपाईंको पहिलेको परीक्षणबाट अन्तर्दृष्टिमा आधारित हुनुपर्दछ। A / B परीक्षण त्यो हो जहाँ पृष्ठमा परिवर्तनहरू गरिन्छ, र एक संस्करणको रूपमा बचत गरिन्छ। आगन्तुक ट्राफिक यी भेरियन्टहरू बीच विभाजित गरिएको छ, र राम्रो रूपान्तरणको साथ एक 'जीत'।
र तपाईको साइटको राम्रो संस्करणको साथ एकचोटि तपाईले छोड्नु भएपछि तपाईले फेरि फेरि चक्र सुरू गर्नुहुन्छ!
हामीले हाम्रो साइनअप पृष्ठमा फ्रेशमार्केटर प्रयोग गर्‍यौं, यसलाई फ्रिममार्केटर प्रयोग गरेर स data्कलन गरिएको डाटाको आधारमा बनाइएको परिकल्पनाहरूमा आधारित ट्वीक्स बनाउँदैछ, जसले तीन दिन भित्र २ 26% ले साइन अपलाई बढावा दिन्छ। शिहाब मुहम्मद, FUsdesk मा BU हेड।
उद्योग विशेषज्ञहरु द्वारा गरिएको अध्ययन र अवलोकनका अनुसार रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसन आगामी वर्षहरुमा ठूलो बृद्धि भएको देखिएको छ किनकि अधिक र अधिक बजारहरु आफ्नो अभियानहरुमा सीआरओमा बढ्दो महत्त्व राख्छन्। यसको बहुमुखी प्रतिभा, प्रयोगमा सजिलो र अनौंठो सुविधाहरूका आधारमा, फ्रेशमार्केटर क्षेत्रको विकासको फाइदा लिन राम्रोसँग राखिएको छ।
Freshmarketer कसरी कम्पनीहरूले रूपान्तरणहरू अनुकूलन गर्न र साइट प्रदर्शनमा गहिरो हेर्न सक्छन् भन्ने सर्तमा एक विकासात्मक लीप प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो उद्योगमा ढिलो प्रगतिलाई ध्यान दिनुहोस् संगीतको तुलनामा, जुन रेकर्डबाट सीडीमा, आईपडहरू, र अन्त्यमा, स्ट्रिमिंगमा द्रुत गतिमा सारियो। हाम्रो क्रोम प्लगइन सीआरओको अर्को चरण हो र रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसनको भविष्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, विभिन्न रूपान्तरण मोड्यूलहरू एकीकृत गरेर यसलाई निर्बाध र अधिक कुशल बनाउन हाम्रो प्रयासहरूको लागि धन्यवाद। हामी अपेक्षा गर्दछौं द्रुत अपननको रूपमा आवश्यकता र रूपान्तरण दर अनुकूलनको लागि बजेट विश्वव्यापी रूपमा बढ्छ। इ-कमर्स र सास फर्महरूले तुरून्त ए-बी र फनेल परीक्षणको साथ रिअल-टाइम हीटम्यापिppingको लागि एकल सूटको फाइदा महसुस गर्नेछन्।
Freshmarketer नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्
टैग: ab testक्रोम प्लगइनरूपान्तरण अनुकूलनरूपान्तरण दर अनुकूलनक्रोक्रो सूटताजा मार्केटरताजा कार्यहरूफनेल विश्लेषणगुगल क्रोमगुगल क्रोम प्लगइनतातो मानचित्रणतातो नक्शाहीटमैपिंगहीटम्याप्सप्रत्यक्ष डाटा रिपोर्टिंगप्रत्यक्ष डाटा रिपोर्टहरूअनुकूलनURL विभाजनक्लिक ट्र्याकजरगेट